တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ ဥက္ကဋ္ဌတို့တွေ့ဆုံ - Xinhua News Agency
ပေကျင်း၊ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိသည် ၇၆ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ (UNGA) ဥက္ကဋ္ဌ အဗ္ဗဒူလာ ရှာဟစ် (Abdulla Shahid) နှင့် စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်က ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။UNGA အနေဖြင့် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နှင့် ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဖြူးမှု မျှတရေး မြှင့်တင်ရာတွင် ပို၍ကြီးမားသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရန်၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေး နှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအား ကာကွယ်ရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တိုးမြှင့်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ပံ့ပိုးရန် ဝမ်က တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုနှစ်သည် ကုလသမဂ္ဂတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (PRC) ၏ တရားဝင်နေရာ ပြန်လည်ရရှိခြင်း နှစ် ၅၀ ပြည့်မြောက်သည့် အခါသမယလည်းဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ မဲဆန္ဒသည် အမြဲတစေပင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများက ပိုင်ဆိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ တရားမျှတမှုနှင့် ကောင်းမွန်မျှတမှု ပံ့ပိုးရာတွင် အစဉ်ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က ပြောခဲ့သည်။
ရှာဟစ်ကလည်း တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့်နှင့် ကုလသမဂ္ဂတွင် PRC ၏ တရားဝင်နေရာ ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်း နှစ် ၅၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အပေါ် ဝမ်းမြောက်ကြောင်းသဝဏ်လွှာကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီး UNGA ၏ ယခုအစည်းအဝေး၏ အဓိကအစီအစဉ်အား ပူးတွဲအဆင့်မြှင့်တင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ အနီးကပ်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ပေကျင်း ဆောင်းရာသီအိုလံပစ် (Beijing Winter Olympics) အား အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးနိုင်ရန် ဆန္ဒပြုကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Sept. 24 (Xinhua) — Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi on Thursday met with Abdulla Shahid, President of the 76th session of the United Nations General Assembly (UNGA), via video link.
Wang called on the UNGA to playabigger role in promoting anti-pandemic cooperation and fair distribution of vaccines, support efforts to tackle climate change and protect biodiversity and promote sustainable development.
Noting that this year marks the 50th anniversary of the restoration of the lawful seat of the People’s Republic of China (PRC) in the United Nations, Wang said China’s vote will always belong to developing countries and will always be in support of international justice and fairness.
Shahid extended congratulatory greetings on the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China and the 50th anniversary of the restoration of the PRC’s lawful seat in the United Nations, and expressed hope to work closely with China to jointly advance key agendas of this session of the UNGA.
He also wished the Beijing Winter Olympicsacomplete success. Enditem
Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi addresses the Second Voluntary National Review on Implementation of the United Nations (UN) 2030 Agenda for Sustainable Development atahigh-level forum of the UN Economic and Social Council via video link in Beijing, capital of China, July 14, 2021. (Xinhua/Zhai Jianlan)